न्यायलयमा प्रदुषण फैलिएको छ ः प्रथम राष्ट्रपति यादव – Ankush Daily
न्यायलयमा प्रदुषण फैलिएको छ ः प्रथम राष्ट्रपति यादव
On १३ आश्विन २०७६, सोमबार ००:१९
काठमाण्डौं, १२ असोज ।
देशान्तर साप्ताहिकको ३७ औं वार्षिकोत्सवमा आयोजित देशान्तर अनलाइन टेलिभिजनको उद्घाटन नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवले गर्नुभएको छ ।
सो उद्घाटन समारोह सम्बोधन गर्दै डा. यादवले मुलुकको न्यायपालिका, संवैधानिक अंग सेना, प्रहरी, र कर्मचारीमा प्रदुषण फैलिएको बताउनु भयो । वहाँले अथक परिश्रमले प्राप्त भएको गणतन्त्र जोगाउन सबैको जिम्मेवारी भएको बताउंदै नेपाली प्रेसले जनतालाई सुसुचित गर्ने काम निर्भिकतापूर्वक गरिरहेकोमा प्रशंसा गर्नुभयो ।
अर्का वक्ता नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकार अधिनायकवाद तर्फ उन्मुख भइरहेको चर्चा गर्दै पहिला लेनवाद, माओवाद हुंदाहुंदा सीजिनपिंङवाद तर्फ उन्मुख रहेको भन्दै सिजीनपिङपछि अब अरु कुन वाद तर्फ नेपालका कम्युनिष्टहरु उन्मुख हुने त्यो चर्चाको विषय भएको बताउनु भयो ।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले वर्तमान सरकार नवमण्डलेमा रुपान्तरित भएको चर्चा गर्दै फरक विचार बोकेका व्यक्तिहरुमाथि ठाउँठाउँमा आक्रमणमा उत्रेको आरोप लगाउनु भयो । नेपाली कांग्रेस कम्युनिष्टहरु भन्दा अलि थारै मत पाएको र संसदमा पनि कम उपस्थिती भएको भन्दैमा हेप्न नहुने भन्दै यो मुलुकको नियो पार्टी कांग्रेस नै भएको बताउनु भयो ।
देशान्तर साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक कबिर राणाको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रम सम्पादक बिनय देवकोटाले संचालन गर्नुभएको थियो । सो समारोहमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शंशाक कोइराला, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्यहरु डा. शेखर कोइराला, डा. रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, दिपक गिरी लगायतहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।